I-Samsung Galaxy Fit isungulwe ngokusesikweni eSpain | I-Androidsis
UEder Ferreño | | Samsung, SmartWatch
Kumsitho wokunikezelwa kwawo ngoFebruwari, apho sazana khona neefowuni eziphezulu, iSamsung nayo isishiye nayo entsha isizukulwana sezinto zokunxiba. Isizukulwana esithi ukuthengisa kakuhle kwimarike. Phakathi kweemveliso ezishiyiweyo yinkampani yaseKorea Le sisacholo sakho esitsha, iGlass Fit. Isacholo esenziwe ngokusesikweni kwimarike yaseSpain.
Le Galaxy Fit ayizukufika yodwa, kuba inguqulelo eyongezelelweyo nayo iyasungulwa, eyi-Fit E.Yinto eyahlukileyo yesongo iza nobukhulu obuncinci kunentsusa, kodwa ngokomgaqo sinokwenza okufanayo ngazo zombini.
Kukho umahluko kwiphaneli esetyenzisiweyo, elula kakhulu kwimeko yeFit E. Ke ngoko, le bracelet iza nexabiso elifikelelekayo eSpain. Kuba kunokwenzeka yithenge ngee-euro ezingama-39 ezivenkileni, nakwi-intanethi njengakuma amazon. Isacholo esihle, esinexabiso elinomtsalane kakhulu.
Kwelinye icala sineGlass Fit. Isacholo esime ngaphandle ngokuba nepaneli ye-AMOLED, ngokungathandabuzekiyo ebangela ukuba ixabiso layo liphezulu. Ikwavela ngokuxhathisa kwamanzi kunye nokuqinisekiswa kwezomkhosi, MIL STD 810G. Ke siyazi ukuba sisacholo esomeleleyo.
Ixabiso lale Galaxy Fit ekumiselweni kwayo eSpain ngama-99 euros. Singayithenga ngoku kwiivenkile ezibonakalayo nezikwi-intanethi, unako thenga apha kwiAmazon. Inikwe njengesongo esifanelekileyo, esiza kuqhubeka nokukhulisa ubukho beSamsung kweli candelo lezinto ezinxibekayo.
Iindlela ezimbini ezintsha kubasebenzisi abafuna ukunxiba, kodwa abafuni smarwtatch. Ezi Galaxy Fits zinako konke ukuba ibe ngumthengisi ogqwesileyo. Lo nto Siza kubona ukuba yeyiphi impendulo abayifumanayo ekusungulweni kwayo eSpain. Ucinga ntoni ngala masongo avela kuhlobo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » I-Galaxy Fit kunye neFit E ziqaliswe ngokusemthethweni eSpain